Garbahaareey: Tallaabo kale oo ku dayasho mudan
By ibrahim Aden shire August 28, 2017
Tan iyo marki ay dowladdi dhacday, dadka soomaaliyeed waxaa aabo iyo hooyo ay u dhib sheegtaan u noqday hay'adaha samafalka. Haddii abaaro dhacaan ama duufaano iyo daadad na wax yeelaayaan, halki aan ka fakari lahayn sidaan biyaha isaga moosi lahayn waxay noqotay inaan ka dhursugno hay'ad dibada ka timaado oo wax noo qabato ilaa ay ku dhawaatay in ninka koorta geela oogu xiran hadii ay ka jabto uu isku dayo inuu hay'adaha caalamiga ah u qayshado si ay koorta ugu qodbaan.
Laakiin waxaa hadda muuqdo ifafaalo wanaagsan oo muujinayo inaan fahamnay in dhisida dhulkeena inaga un na sugayso. Isbadalkaan cusub ayaa ka bilowday dagmada Garbahaareey oo dhawaanahaanba meelo badan hormuud ku ahayd.
Labo iyo toban bilood gudahood waxaa la marayaa in la dhiso sadex buundo oo dhammaantood ay maal galiyeen gudiga dagmada iyo shacabka oo iskaashanayo. Buundooyiinkaan maahan kuwo waaweyn ee waa kuwo la saaray farraqyo yaryar oo ninkeed dhiba ahaa.
Hadda waxaa gacanta lagu hayyaa sadexdaan buundo tii ugu danbeeyay. waxaa ku baxayo qarash gaarayo 13 kun oo doolar. lacagtaan inteeda badan waxay ka timid canshuurti laga qaaday magaalada. Arintaan ayaa ah mid ugub ah oo ku cusub guud ahaan dalka soomaaliyeed gaar ahaana Gedo. Awal wixii qarash ah ee dadka laga qaado waa lagu qayili jiray waxna oogama soo noqon jirin dadki laga qaaday iyo deegaanka toona.
Isbadalkaan waa mid lagu farxo oo ku dayasho mudan. waa mid madaxda gobalka iyo maamulka dagmadu ay ku mutaysteen in lagu amaano. Waa mid dhiiri galin u ah dadki canshuurta bixiyay, sidoo kalana horseedi doonto inay mid ka badan bixiyaan kuna raali noqdaan bixinta canshuurta oo ah mid soomaalidu nacebtahay.
Talo ku Socoto Maamulka dagmada Gar ahaan gudoomiye Iimaan
Dhacdadi dhawaan lagu laayay dadki xoolo dhaqatada ahaa wuxuu sababay niyad jab badan iyo dhaleecayn loo jeediyay gudoomiye Iimaan. Waxaan anigu shaqsiyan ka mid ahay dadka aaminsan inuu gudoomiyihu si laga fiican yahay ooga jawaabay dhacdadaas. Laakiin Rasuulku SCW wuxuu yiri "ha wada nicin walaalkaa/walaashaa, haddii uu meel u xun yahay meel kale ayuu ku fiicanyahay".
Sidaa owgeed, inkastoo dhacdadaas nasiib darrada ah dhaawac keentay, tallaabooyinka aad xaga horumarka u qaaday waa kuwo ammaan mudan, adigana waxay ku yihiin fursad aad mar kale ku kasban karto shacabkaadi kuu calool xumaaday.
Marki aad xusto wanaagi kuwii kaa horeeyay ayaa wanaagaada ka xussaa. Qiimaha aad u yeesho dadkii dalkaan iyo dagmadaan magaca ku lahaa ayaa noqon doono kuwa lagugu xasuusto haddii aad fursadaan ka faaiidaysato. Fursadda aan ka hadlayo waa inaad furto waddo cusub oo ilaa hadda aanan ogayn cid kale oo ka mid ah maamulada dagmooyinka gobalka oo kaaga horaysay. Arintas ayaa ah inaad buundooyinka la dhisayo lagu maamuuso dadkii magaca ku lahaa dagmada.
Adeerkay ha loogu magac daro, mayee awoowgay ha loogu magac daro!
Xasadka iyo xinka xad-dhaafka ah ee dadka dhex yaal wuxuu keeni karaa in la isku qabsado cidda loogu magac darayo waddo ama buundo la dhisay. Haddii maamul adag oo aragti fog la helo waa laga gudbi karaa caqabadaas.
Naguma cusba in deegaan miyyi ama magaalo ah loogu magac daro shaqsiyaad dhibna kama dhici jirin. Magac bixintaan waxay ku timaadaa labo arrimood midkood. Kow: in qof meel uu dagi jiray ama uu deegaankeeda bilaabay loogu magac daro sida, Buulo-Xaawo, Qawaaf, Tuulo-Gordo, Hareeriga Nuur Shareeco ama Cadayga Cabdi Aadan. Labo, inay dhacdo caan noqotay ay ka dhacday sida Barriiqada Xasan Ileey.
Anigoo ka qiyaas qaadanayno magac bixinadaas waxaan soo jeedin lahaa in buundada horay loo dhisay ee garoonka diyaardaha loo maro loogu magac daro Cabdifitaax Maygaag oo ahaa muwaadin ku dhintay gacan ka xaqdaran oo shisheeye. Magac bixintaan waxay noqon mid magac iyo sumcad u ah marxuumka, innagana waxay noo noqon tacsi iyo laab qabowsi.
Sidoo kale, waxan soo jeedin lahaa in midda hadda la dhisayo loogu magac daro Allaha u raxmadee Jaamac Xassan oo ahaa oday magac weyn ku lahaa dagmada, gurigiisana ay tahay meesha buundadu marayso.
Gunaanadkii waxaa ii muuqdo horumar xagga maskaxda ah. waxaad moodaa inuu dadku soo bislaanayo danahoodana ay garan doonaan. Haddii sidaan lagu wado waxaan dhisan karnaa dalkeena inagoo cidna nooga imaan Talyaani Sacuudi.